Kheyre Oo Lagu Eedeeyey In Uu Lacag kula Gadayo Xildhibaanada iyo Odayaasha Gaalkacyo+Dhageyso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Kheyre Oo Lagu Eedeeyey In Uu Lacag kula Gadayo Xildhibaanada iyo Odayaasha Gaalkacyo+Dhageyso
wajigii ugu Horeeyey ee kulamadda Odayaasha iyo Xildhibaanada laga soo doorto Gobalka Mudug ay la qaateen Ra’iisulwasaare Kheyre ayaa guul daro ku soo dhamaaday ka dib markii la isku Fahmi waayey dhowr qodob oo ay soo jeediyeen Siyaasiyiinta iyo Odayaasha dhanka Gaalkacyo.
Ra’iisulwaare Kheyre ayaa loo soo jeediyey in si cad uu usheego in uu burburey Heshiiskii Xaaf iyo Ahalusunna,in Doorashooyinka Galmudug lagu saleynayo Dastuurkii ay Awooda ku qeybsadeen 11-ka beelood ee dhigayey in Baarlamaanka Galmudug uu yahay 89-Xildhibaan,Qodobadaas oo u cuntamiyeey Wafdiga Kheyre.
Nabadoon Cali Diiriye Allooye oo la hadley Idaacadda Simba ayaa Sheegey in aysan aqbali doonin dhibaatooyin iyo Fowdo Siyaasadeed oo Xasan Cali Kheyre uu la yimid Gaalkacyo waxa uuna intaas hadalkiisa raadiyey in ka Odayaal ahaan aysan la kulmi doonin Kheyre asagoo aan isfaham Siyaasadeed la gaarin Xildhibaanada labada aqal ee laga soo doorto Gobalka Mudug.
dhanka kale Nabadoonka ayaa sheegey in Ra’iisulwasaare Kheyre uu wato Lacago doonaya in uu u adeegsado burburinta Mowqifkooda Siyaasaddeed ee Bulshada Gobalka Mudug lacagahaas oo la siiyano Odaayaasha si ay u ogolaadaan Qorshaha Kheyre ee Arimaha Galmudug.
Ra’iisulwasaare Kheyre ayaa wararku waxaa ay sheegayaan in uu ka meermeerayo kulan uu la qaato Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka oo qaarkood ay siyaasadda Dowladda dhexe ay horey ugu Colooben.
Halkaan ka Dhageyso Nabaddoon Cali Diiriye.